Ngaba uyalandelelwa ngumqeshi wakho? | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Ngaba uyalandelelwa ngumqeshi wakho?
Sebenzisa i-GPS ukulandelela abasebenzi bakho ngumbuzo osisiseko obuzwe ngabaninzi, sizibuza ukuba “ngaba kusemthethweni na ukulandelela abasebenzi bethu?” Umbuzo, nangona kunjalo, uxhomekeke kwizinto ezimbalwa. Kwinkqubo yeofisi, abasebenzi bahlala bekulindeleke ukuba baphendule kwii-imeyile zabo kwangoko kuba bahlala bephambi kwekhompyuter yabo okanye bephethe izixhobo ezinokufumana ii-imeyile. Ngokumalunga nobuchwephesha be-GPS kunye nemfihlo yabasebenzi, amanye amazwe ajonga lo mthetho kumthetho wawo. Kwiimeko apho kungaphendulwanga khona, abaqeshi banokunxibelelana nemithetho yamatyala kodwa oku akuhlali kuyanele.
Kukho izizathu ezimbalwa zokuba abaqeshi bangafuna ukulandelela abasebenzi babo, oku kunokubandakanya ukufuna ukwazi ukuba abasebenzi bayasebenza xa besithi bayasebenza. Kwimizi-mveliso yokuhamba apho iimoto zisetyenziselwa imisebenzi yemihla ngemihla. IGPS inokunceda ekuqhubeni komqhubi kwaye ikwancede ukubakhokelela kwindawo. Kumashishini afuna ukuthuthwa kunye nokudluliselwa, umz. Iizothutho ze-E ezinjenge-Uber, iLyft kunye neRhafu. Ngokwesiqhelo kukho imfuneko yokusebenzisa i-GPS ukwazi ukuba ngabaphi abasebenzi kufutshane nendawo apho bafuneka khona.
Ii-trackers ze-GPS ngamanye amaxesha zibekwa kubasebenzi ukuze bazi ukuba bayasebenza na ngexesha labo lomsebenzi njengoko benjalo, ayisiyongxaki kuba isivumelwano sihlala sifikelelwa, umqeshwa uhlala eyazi into yokuba umkhondo ubekiweyo kuye. Oku kuhlala kuhlolo ukuze wazi kwaye ubeke iliso ekusebenzeni kwabo okanye ukwazi nokuba bayasebenza okanye bayekile nje, oku kuyakwenza ukuba bazi ukuba bayawuyeka nini na umsebenzi. Ngexa usemsebenzini kulindeleke ukuba ubekhona emsebenzini kwaye ungahambi xa ushiya imvume kufuneka uthathwe kwaye nje ukuba kuvunyiwe akukho ngxaki. Itekhnoloji ye-geolocation isetyenziselwa iinjongo ezimbalwa, zinokuba:
ukuthobela ukutya kunye nekhefu lokuphumla
Ukuvuselelwa kwesithuthi senkampani ebiweyo
Ukufumana isithuthi ngexesha likaxakeka njengengozi
Ukujonga ukusebenza kakuhle kwabasebenzi
Ngelixa ungekho emsebenzini, kuya kuba yinto ephosakeleyo kakhulu kunye nokungabinamfihlo komoya ukulandelela abasebenzi bakho. Nantoni na abayenzayo okanye ababandakanyeka kuyo ngaphandle kweeyure zomsebenzi akufuneki ukuba ibekhona kwiinkampani ezichaphazelekayo, kukho iimeko apho abasebenzi kuye kwafuneka bancame abaqeshi babo ngokubahlola ngexesha bengekho emsebenzini. Wonke umntu unelungelo lobomi kwaye kufuneka avunyelwe ukuba azibandakanye okanye enze nantoni na abanokuziva ngathi bayayithanda. Ukwaphula umthetho kubucala yinto enkulu kwaye kunokutsala inkundla enkulu ukuba umqeshi ufunyaniswe enetyala, kuyafuneka abasebenzi bazi malunga ne-GPS trackers kwaye bavumelane nayo nayiphi na into ebiziswa yinkampani. Abasebenzi kufuneka benziwe baqonde ukuba abanabucala ngasese nasemsebenzini, oku kuxhomekeke kwinto eyenziwa yinkampani.
Kutheni abaqeshi belandela abasebenzi?
Ayonto intsha kwaphela ukuba abaqeshi balandelele abasebenzi babo, enyanisweni, iya iba yinto eqhelekileyo emisebenzini. Ngokwendalo, nawuphi na umqeshi usoloko enomdla wokwazi ukuba kuqhubeka ntoni kwinkampani yabo kunye nezinto ezenziwa ngabasebenzi babo, bahlala bafuna ukubeka iliso kwizixhobo zabo. Le isenokuba yivenki okanye iselfowuni ekhutshwe ngumqeshi, balandelela ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bayangena kwaye bayashiya emsebenzini. Abanye abaqeshi bafuna ukwazi ukuba abasebenzi bayabazisa ngokwentshukumo yabo kubo, bangaphazamisi phakathi kweeyure zomsebenzi ukugqiba imisebenzi yabo yasekhaya. Ezinye izibonelelo zokulandela umkhondo kubasebenzi:
ukufumana iindlela zokuhamba zabasebenzi abahambahambayo ingakumbi abasebenzi abasahambisayo
Ukugcina imigaqo yokhuseleko kuthotyelwa ngokuqinisekisa ukuba imithetho yokhuseleko ezindleleni iyalandelwa, umz. ukukhawulezisa isantya kunye nokuqhuba ngokungakhathali
Ukubeka iliso ngexesha elichithwe ngabaqeshi emsebenzini kunye nokuthelekisa ikhadi labo lexesha kunye neerekhodi.
Abaqhubi abalahlekileyo banokulandelelwa kwaye bafumaneke besebenzisa itekhnoloji ye-GPS.
Kodwa ngaphambi kokuqala le nkqubo yokulandela umkhondo, kulungile ukuba uqaphele kwaye uqiniseke ukuba akaphuluki ubumfihlo okanye ukophula umthetho kwaye zonke iimfanelo zomthetho sezilungisiwe. Abasebenzi kufuneka baqinisekise ukuba abaphuluki ukuthembakala kwabaqeshi.
Ukufumana isizathu esifanelekileyo sokulandelela abasebenzi
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokulandela umkhondo wabasebenzi kunye nemisebenzi yabo, kufuneka uze nezizathu ezaneleyo ezinokuma kwaye zivakale ngokufanelekileyo. Ngaphandle koko, abasebenzi bakho banokukholelwa ukuba ubophula ubumfihlo babo ngaphandle kwesizathu. Nazi izizathu ezanelisayo:
Ukonyusa ukusebenza kweendlela zokuhamba
Ukuphucula ixesha lokuphendula kwabasebenzi kwisicelo samakhasimende
Ukunyusa imveliso ngokubanzi
Khangela ukuba loluphi na malunga lwabasebenzi ngokukhawuleza ukuze bababele kwiindawo ezithile okanye umsebenzi othile
Ukuthintela ukulahleka kweeyure zomsebenzi
Amanye amazwe avumela ukufakwa kwabakhweli kwizixhobo zenkampani ezinjengeefowuni, iilaptop, iitafile, kunye nezithuthi ukuze nje bazi ukuba kuyenziwa nokulandela ixesha lobusela. Kubalulekile ukuba wazise umsebenzi we-tracker ukwenzela ukuba ubonakale kwaye uqinisekise nokuphendula ngokukhawuleza kwimiceli mingeni ephakanyiswe ngabasebenzi. Imvume ibaluleke kakhulu kwaye akufuneki ithathelwe ingqalelo, imithetho yelizwe iyathetha ngayo kwimithetho yabo. Ukuba ufuna ukulandela umkhondo wabasebenzi bakho, kuya kufuneka ngeli xesha lokusebenza njengoko kuchaziwe ngaphambili.
Iindlela ezinkulu zokulandela umkhondo we-GPS
Unokulandela umkhondo wabasebenzi ukonyusa ukusebenza, qinisekisa ukuthotyelwa kwemigangatho yokhuseleko okanye uphando lwabasebenzi xa bengafezekisi iinjongo zabo zekhontrakthi. Oku kulandelayo kufanelekile ukwazi:
Ulwazi oluchanekileyo lomthetho kwingingqi yakho okanye ilizwe lakho, kwaye uhlonele ubumfihlo ngelixa ulandela iimfuno zomthetho
Ukulandelelwa kwe-GPS kufuneka kwenziwe kuphela kwipropathi yenkampani kwaye kungabi kwipropathi yabucala, oku kunokuqala ubunzima bezomthetho.
Abasebenzi kufuneka balandelwe kuphela kwimida yeshishini. Akukho ukulandelwa kobuntu okanye babucala kufuneka kwenziwe.
Ukuba nesivumelwano esayiniweyo nesibhaliweyo ngokucacileyo esibonisa iinkqubo zokulandela umkhondo kunye nemida yazo.
Yiba nolwazelelelo kwaye unoxanduva lokufumana idatha.
Ukuqukumbela, njengoko kukho izizathu ezininzi inkampani enokufuna ukulandelela abasebenzi bayo, kufuneka yenziwe ngaphakathi kwemigaqo esemthethweni kunye nezivumelwano. Oku kulanda umkhondo akufanele kubuphule ubomi babucala babasebenzi ababandakanyekayo.
4668 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-2 Namhlanje